मिल्दाजुल्दा समाचारहरु | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← प्याज किलोको १ सय नाघ्यो
हा हा हा हा हा ……. छि…छि ….छि →
विश्वका यी रोमान्टिक जोडी पेरिस प्रुान्स । विश्वमा गजब गजबका रोमान्टिक जोडीहरु भेटिन्छन् । यस्ता चर्चित जोडीमा प्रुान्सका राष्टपती सरकोजी र उनकी पत्नी कार्ला ब्रुनी पनि पर्छन् । राष्ट्रपति सारकोजी धर्मपत्नी पूर्व मोडेल प्रथम महिला कार्ला बु्रनीको भनाईमा लागेर अक्सर कठोर व्यायाम गरेको देखिन्छ । प्रथम महिला ब्रुनीको चाहना छकि उनका पति सरकोजी…
सेक्सका चार गलत धारणाहरु एक ल्फिममा नायकले जब नायिकाको चुम्वन लिन्छन त नायिका अत्तालिदै भन्छिन अब उनलाई बच्चा हुन्छ । त्यस्तै गलत धारणाहरु आम मानिसमा पनि हुनसक्छ । यस्तै केहि गलत धारणाहरुका वारेमा यहां चर्चा गरिएको छ । १ पुरुषलाई महिलाहरुको तुलनामा सेक्सको चाहना बढी हुन्छ । तर यस्तो बिल्कुलै होईनकि पुरुषलाई सेक्सको चाहना…
के हुन त सेक्सका दश फाईदा ? यौनक्रिया सेक्स यस्तो विषयबस्तु हो जो कोहिपनि यससंग जोडिएको हुन्छ । प्रायः मानिस यस सम्वन्धमा जिज्ञासु हुदाहुदै पनि यस’bout कुरा गर्न रुचाउदैनन् । समाजमा सेक्सका ’boutमा धेरै गलत धारणाहरुपनि रहेका छन् । तर सेक्स धेरैमानेमा स्वास्थ्यको निम्ति फाईदाजनक छ । सेक्सको मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको हुन्छ । हेरौं सेक्सका…
कसरी पार्टनरलाई सेक्सका निम्ति तयार गर्ने ? त्यसोत प्रेमलापका निम्ति न त कुनै समय हुन्छ न त कुनै नियम । प्रेम गर्नेहरु सारा संसार बिर्सेर प्रेम गर्छन । एकापसमा आलिंगन गर्ने प्रेमीहरुले यो पनि विचार गर्दैनन् कि उनिहरु कहां छन् । अर्को तर्फ प्रेमलाप गर्नेहरु सेक्ससंग जोडिएको कुनैपनि काईदा कानून मान्दैनन् । तर धेरै पटक यस्तोपनि हुन्छ…
दिमागको कुरा बुझ्ने कम्प्युटर लण्डन । वैज्ञानिकहरुले महत्वपूर्ण उपलव्धि हासिल गर्दै एक यस्तो मनोवैज्ञानिक कम्प्युटर विकसित गरेका छन् कि जुन न केवल तपाईको दिमाग पढन सक्छ उसको गतिविधिको ’boutमा जानेर त्यस्को खाका पनि तयार पार्छ । यानी तपाई जे सोच्नु हुन्छ त्यो कम्प्युटरले सजिलैसंग जान्दछ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार यो कम्प्युटरले तपाईको दिमागी गतिविधी जानेर…
विवाह पूर्व सेक्स युवाहरुकालगि सामान्य कुरा हालै गरिएको एक सर्वेक्षणमा युवाहरुवीच विवाह पूर्व सेक्स सामान्य कुरा बनि सकेको थाहा लागेको छ । सर्वेक्षणले विवाह पूर्व सेक्स त चलन नै बनिसकेको देखाएको छ । सबभन्दा चिन्ताजनक कुरा त के देखियो भने यौन सम्पर्कका बेला अपनाउनु पर्ने सतर्कता प्रति युवापीढीमा कुने सावधानी देखिएन । उनिहरु सतर्कता प्रति बेखबर…
महिलाको मनमा गोप्य कुरा धेरैबेर रहदैन लण्डन । यदि तपाई आफ्नो अति गोप्य कुरा कुनै महिला मित्रलाई बताउनु भएको छ भने सावधान रहनुस । हुनसक्छ यहि गोप्य कुराले केहि दिन भित्रै तपाई कुनै अर्को साथीका सामुन्ने लाजले भुतुक्क हुनु पर्नेछ । किनकि हालैको एक अध्ययनले महिलाहरु औशत ४७ घण्टा भन्दा बढी समय कुनै गोप्य कुरा मनमा…
एमाले-माओवादी एकताका कुरा वामदेव गौतम फाल्गुन २३ – एमाले मात्र हैन, युद्धको अनुभव बोकेको माओवादी पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाअन्तर्गतको आवधिक निर्वाचनमा सामेल हुने भइसकेको छ । अब हामी नयाँ किसिमको बाटोबाट अघि बढ्दै छौं । यदि विगतका राम्रा परम्पराहरूको आत्मसात् गर्दै जानसक्यौं भने आफ्ना कमजोरी हटाउन सकिन्छ, अरूका कमजोरीबाट शिक्षा लिएर नयाँ किसिमले अघि…
बाँसमा माया पिरतीका कुरा बुद्धवीर बाहिङ ‘आँसुको सागरमा डुबे पनि बिहानीको फूलसँगै हाँसेको छु, मुटुमा सहन नसक्ने घाउ र चोट भए पनि तिमीलाई जीवनसाथी मानी बाँचेकी छु ।’ यो कुनै प्रेमीले प्रेमिकालाई प्रेमपत्रमा लेखेको प्रेमका शब्दजाल होइन न त कसैको प्रतीक्षामा बाँच्न मुस्किल पर्दाको अट्टहास शब्दहरु नै हुन् । सम्बन्धित व्यक्तिले नै भेटेमा ह्दय…
गर्वको बात, शर्मको कुरा ! एक साथीको प्रश्न थियो -’के विवाह पूर्ब महिलाहरु वर्जिन (कुमारित्व) हुनु गर्वको बात हो ?’ अर्को साथीले तत्काल जवाफ दियो- ‘गर्व शर्वको कुरा मलाई थाहा छैन, हाम्रो निम्ति यो शर्मको कुरा पक्कै हो ।’ …
फोटो एकतिर : कुरा तीनतिर …
सभापति चयनमा कुरा मिलेन काठमाडौं, ११ भदौ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल,माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासहितका शीर्ष नेताहरुबीच संवैधानिक समितिको सभापति चयनमा दलीय सहमती खोज्न बिहीबार भएको छलफल बिना सहमति टुङ्गिएको छ। छलफल भने शुक्रबार पनि हुने भएको छ। माओवादी र का‌ग्रेस दुबैले सभापतिमा नछादने बताएपछी बैठक निश्कर्षमा पुग्न सकेन । माओवादीलाई…
राष्ट्रपति शासनको कुरा हल्ला मात्र दमौली जेठ ११ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता अर्जुननरिसंह केसीले राष्ट्रपति शासनका विषयमा बाहिर चलिरहेको हल्ला साँचो नभएको बताउनुभएको छ । नेपाल प्रेस युनियन तनहुँ शाखाले हिजो दमौलीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता केसीले एकीकृत नेकपा माओवादीले सर्त राखेर सहमतिमा बाधा पुर् याएको बताउनुभयो । आफुहरु सहमतिकै पक्षमा रहे पनि माओवादीले सहमति…
‘चिनियाँ राष्ट्रपतिले तिब्बत सुरक्षाको कुरा उठाए’ ‘चीन लगत्तै भारत भ्रमण हुनसक्छ’ पूर्ण बस्नेत, हङकङ चीन – पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग चीनको जिनान शहरमा शुक्रबार भएको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले तिब्बत सुरक्षाको सवाल उठाएको भ्रमण टोलीमा रहेका माओवादी विदेश विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले बताएका छन्। यसअघि शनिबार राती बीबीसी नेपाली सेवासँग…
हातको इशाराले कुरा गर्ने महिला बोल्न थालिन् तनहूँ माघ २९ । चारवर्षसम्म हातको इशाराले बोल्दै आएकी महिला पुनः शब्द निकालेर बोल्न थालेको समाचार सुन्दा कतिपयलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर यहाँकी एक महिलाको जीवनमा नयाँ आयाम थपिएको छ । जिल्लाको बन्दिपुर गाविस वडा नं। ३ थारुबास घर भई हाल सदरमुकाम दमौलीमा बस्दै आएकी २८ वर्षीया सुशीला विश्वकर्मा…
संविधानसभा भङ्ग गर्ने कुरा काङ्ग्रेसले गरेको छैन दमौली कात्तिक २५ । नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्दं्र पौडेलले संविधानसभा भङ्ग गर्ने कुरा काङ्ग्रेसबाट नआएको स्पष्ट गर्नुभएको छ । उहाँले काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेताले बोल्दै नबोलेको र सोच्दै नसोचेको कुरालाई एमालेका केही नेताहरुले बोल्दै हिड्नु गैर जिम्मेवार काम भएको बताउनुभयो । रिपोटर््स्र क्लव नेपाल तनहुँद्वारा आज दमौलीमा आयोजित साक्षात्कारमा नेपाली…
माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाउनु हास्याद्पद :देउवा भवानी प्रसाद शर्मा पर्वत कात्तिक ११ । नेपाली काग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पुर्व प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाले एकिकृत माओवादीले उठाएको नागरिक सर्वोच्चताको नारा सत्ता प्राप्तिको मोह भएको वताउनु भएको छ । ‘जनतालाई तसा्रएर र हात खुट्टा भाचेर आएको माओवादीले नागरिक सर्वोच्चताको कुरा उठाउनु हास्याद्पद कुरा हो ‘ नेता देउवाले उक्त…
आफन्तसंग कुरा गर्न नपाउदा चिन्तित छन नेपाली जापानबाट ताराकान्त कंडेल जापान टोकियो असोज ९ / जापानमा बस्ने नेपालीहरु विजया दशमीको महान पर्वमा स्वदेश जान नसकेपनि टेलिफोन संपर्क गरी शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चाहना पुरा हुन हम्मेहम्मे परेको छ । दशैंको चाडबाड शुरु भए लगत्तै नेपालमा स्वजनलाई बारम्बार फोन संपर्क गर्दा संपर्क हुन नसकी हैरान भएका हुन् ।…
नया संबिधानमा महिलाहरुका हकहितका कुरा समाबेश गर्ने प्रतिबद्धता भाषा शर्मा / बागलुङ जेठ २२ । संबिधानसभाका सदस्य रत्ना शेरचनले संबिधानसभाको थप गरिएको म्याद भित्र लोकतान्त्रिक संबिधान निर्माण गर्नका लागि सवै राजनितिक दलहरुबिच सहमतिको बिकल्प नभएको बताउनुभएको छ । महिला तथा बाल अधिकार सेवा केन्द्र र नेपाल महिला संघ बागलुङले आजे कुस्मीसेरामा आयोजना गरेको महिला अधिकार तथा सशक्तीकरण बिषयक…
सेना समायोजनपछि संविधान बनाउने कुरा अमान्य : अध्यक्ष प्रचण्ड क्यान्टोन्मॆन्ट खाली गरेर संविधान जारी गर्ने भनाइभित्र ठूलो षडयन्त्र छ ! बुटवल माघ २३ । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सेना समायोजनपछि संविधान जारी गर्ने भन्ने भनाई आफूहरुलाई कदापि मान्य नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको आज भैरहवामा उद्घाटन गर्दै उहाँले सेना समायोजन र संविधान निर्माण…
वन्दूकका कुरा गरेर जनतामा भ्रम श्रृजना नगर्न आग्रह काठमाडौ, भदौ २२ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सरकारले जे गर्दा पनि विरोध गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्न एकिकृत माओवादीलाइ सुझाव दिनु भएको छ ।सरकारले गरेका हरेक निर्णयको विरोध गर्नु भन्दा शान्ति प्रकृयालाइ तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन कसरि सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्ता गर्न उहांले माओवादीलाइ आग्रह गर्नु भयो । काठमाण्डौको गोकर्णमा…
ठाउँ अनुसारको कुरा फेर्दै हिड्ने नेताको रुपमा माओवादी नेता प्रचण्ड रौतहट फागुन २ । तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन नसकेमा देशमा हुनसक्ने कुनै पनि दुर्घटनाको जिम्मेवारी एकीकृत नेकपा माओवादीले लिनुपर्ने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले बताउनु भएको छ । आइतबार गौर नसर्िङ इ_िन्स्टच्युटको भवन शिलान्यास समारोहमा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री नेपालले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले…
बीस/बाईस दिनमा सवैसमस्या ठिक हुन्छ यो कुरा कतै नछाप्नुहोला भवानी प्रसाद शर्मा पर्वत मंसिर २० । विद्यालयको अगुवाईमा विभिन्न गाविसलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिरहेकै बेला पर्वत जिल्लाको एक उच्च माविमा भैरहेको जथाभावि दिशापिसाबको कारण बिद्यालय आसपासको क्षेत्र प्रदुषित बन्दै गएको छ । विद्यालयको चर्पी केबल सरहरुले मात्र प्रयोग गरिरहेका छन्भने विद्यार्थीहरु जथाभावी विद्यालय ’round दिसा पिसाव गर्न बाध्य…
नग्न बि्टनीले गरिन अंगरक्षकको यौनशोषण यतिबेला बि्रटनी स्पियस्र एक नया विवादमा फसेकी छिन् । उनको अंगरक्षकले उनीमाथि यौन शोषण गरेको आरोप लगाएका छन् । २९ वर्षिय अंगरक्षक फर्नान्डो फ्लोस्रले बि्रटनीव्दारा यौन शोषण गरेपछि सुरक्षा अंगरक्षकको जागिर छाडेका छन् । पूर्व पुलिसकर्मी रहेका फर्नान्डोले आफ्ना साथीहरुलाई बताएकि बि्रटनी उनको सामु नांगो भएर ’round गर्थिन र आफ्नो…
कतै पहिलो चोटी त होईन ? जीवनमा पहिलो चोटी सेक्स गर्नु भनेको एक अलग अनुभव गर्नु हो । किनकि यसमा पुरा का पुरा सेक्स जीवन प्रभावित हुन्छ । यो निकै सुखद कुरा हो । एक छाला अर्को छालाका बीच घर्षणको महसूस गर्नु एक अर्काको शरीरमा खुलदुली पूर्वक विस्तारै विस्तारै छुनुले उत्तेजना बढनाको साथसाथै मनको उव्जेको खुलदुली…
Posted by: Dambar Prasad Rimal Source: Jharpat Cpmpany